Ma ciyaari karo Files MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360? Xaliyay
Madaxweyne Siilaanyo Oo karaa 360 MP4 play videos? Inkasta oo aan si rasmi ah uu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 taageertaa files MP4 ah, si aannu mar mar waxay leeyihiin dhibaatooyin ka ku ciyaaro file MP4 ah ee Madaxweyne Siilaanyo ku 360. Taasi waa sababta oo ah waxa kaliya ee ay taageertaa file MP4 la codec video ah MPEG-4 AVC H.264 iyo MPEG- ah 4. Si loo xaliyo dhibaatadaada, waxaad isticmaali kartaa qalab si sahlan loo isticmaalo weli awood badan sida Wondershare Video Converter in ay gacan ka geysato.
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli videos MP4 in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360.
Taabo aad video leh sifooyinka tafatirka classic, falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan, iwm
Qabtaan 30 X dhakhso xawaaraha la horseedka ka technology APEXTRANS ™.
Hawlaha kale ee sida duuban oo gubanaya.
Tallaabada 1. Load files MP4
Marka hore, ordo this MP4 smart in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 Converter ka dibna dajiyaan aad files MP4 deegaanka midkood riixaya badhanka Add Files in dhinaca kore ee bidix ee interface ama jiitaa-iyo-hoos u files MP4 aad rabto in aad ka soo buugga deegaanka. Waxaa lagu muujiyey in shaashadda hoose.
Hubi in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 oo computer ku yaalaan shabakad isku mid ah. Markaas beddelaan si ay "Stream" Murayaad (waa dhinaca midig ee barnaamijka) iyo Madaxweyne Siilaanyo 360 la soo daabici doonaa. Si fudud u doorato oo ku dhufatey "Stream" button.
In ka furmo suuqa pop up, dul istaagin video ah oo aad rabto in aad sii qulquli iyo riix "Play To TV" button. Markaas suuqa kala Streaming ah, waxaad si fudud u xakamayn karaan loo maqli ah. Tusaale ahaan, halkan aad qabsato karaa mugga ama ku boodaan si ay u dhacdo kale.
Su'aasha 1aad: Waa maxay qaabka video lagu ciyaari karo Madaxweyne Siilaanyo Oo 360?
File MP4 An lagu ciyaari karaa 360 Madaxweyne Siilaanyo Oo si guul kaliya marka file ayaa si buuxda u la kulmay xuduudahan waa sida hoos ku qoran:
Su'aasha 2aad: Siyaabaha kale ee qulquli video on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 for loo maqli karo?
Ka sokow habka kor ku xusan, waxaad ka ciyaari kartaa videos on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 ka Windows Media Center, Zune Software ama Windows Home Server, iwm Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan riix halkan .
> Resource > Video > ma ciyaari karo MP4 faylasha on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360?